« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါကန်ထရိုက်တာမီးသတ်သမားဝန်ထမ်းရေးရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ulukışla-Yenice ဘူတာအမှတ် 1 အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အားကောင်းလာအကြားတွေ့ »
PCs LED LAMP ဝယ်ယူအတွက်ဆိပ်ကမ်း 73 ထိုက်ပေ၏ဧရိယာ၏ LED ကိုပွုပွငျပွောငျးလဲနှင့်အတူ TCDD HAYDARPAŞA RELATED အလုပ်မှာအလင်း
TCDD Haydarpasa ဆိပ်ကမ်း 73 4734 အမှတ်စုဆောင်းရေးစုဆောင်းရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ ၏ LED မီးခွက်သည်ယူနစ်ကနေအန္တရာယ်ရှိဧရိယာအလင်း၏လုပျငနျးမှသက်ဆိုင်ရာဦးဆောင်ေူပာင်းလဲရေးကို နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 471907
က) လိပ်စာ: SELIMIYE မိန်းမဆောင်ဆိပ်ကမ်းMAHALLESİ Burhan Felek လမ်းပေါ်မှ NO: 1 34668 မိန်းမဆောင်ÜSKÜDAR / အစ္စတန်ဘူလ်
တစ်ခုချင်းစီကိုဆီမီးခွက် 73 ထောက်ပံ့ရေး LED ။
ခ) တည်နေရာ: နည်းပညာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဝန်ဆောင်မှုHaydarpaşaဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု
ဂ) အခြေချနေ့စွဲ: ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုတည်းပါတီအားဖြင့်ကယ်လွှတ်ရလိမ့်မည်။
က) Place: တူရကီပြည်နယ်မီးရထား Haydarpasa အစည်းအဝေးအခန်းများဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Led အလင်းပြန်မှုမီးအိမ် Buy ပါလိမ့်မယ် 09 / 04 / 2018 Led အလင်းပြန်မှုမီးအိမ်ရထားများအတွက်ရထားလမ်းစနစ်ဌာန Ankaray စီးပွားရေး Lighting ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် Ankaray စီးပွားရေး Led အလင်းပြန်မှုမီးအိမ်ဝယ်အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝယ်လိမ့်မယ်စားသုံးမှု 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 127516 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ali.altuner@ego.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ် ...
LED Lighting တရားမျှတသော 2014 22 / 05 / 2014 LED & နဲ့ LED Lighting တရားမျှတသော 2014: 10 ။ အဆိုပါ 25 28-2014 စက်တင်ဘာလ9နေ့စွဲအကြားအယ်လ်အီးဒီနှင့် LED Lighting တရားမျှတသောအစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာမှ။ နှင့် 10 ။ ကျနော်တို့ခန်းမအတွင်းစည်းရုံး။ အလင်းရောင်ထုတ်ကုန် LED / component တစ်ခု LED တစ် Semi-ချော display ကိုအဖြစ်အထူးကြပ်မတ်နဲ့ LED & နဲ့ LED Lighting တရားမျှတသော၏အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးပြနေကြသည်။ LED ကိုအပြင်ဧရိယာအလင်းရောင်အတွက် Display, ဗိသုကာနှင့်ထိုကဲ့သို့သော LED မီးအဖြစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအတူကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအားလုံးအရွယ်အစားပြည်တွင်း LED ထုတ်ကုန်အတူတကွပြသောစက်မှုကဏ္ဍရဲ့သာတရားမျှတအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲနည်းပညာများအကြားပြောပြီနှင့်အထူးသဖြင့်အလင်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သူတို့ရဲ့ချဲ့ထွင်ပြီးနောက်, စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူထုတ်ကုန် LED ...
Bursa, လမ်းရထား 23 ကာလအတွက်အချက်နှင့်ဆီမီးခွက်! 11 / 09 / 2013 Bursa, လမ်းရထား 23 ကာလအတွက်အချက်နှင့်ဆီမီးခွက်! ဓါတ်ရထားကာလ, Bursa အတွက်နေ့စဉ်အသက်တာ၏သံသရာ, ၎င်းတို့၏အလေ့အထများနှင့်ဦးစားပေးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ... အပြောင်းအလဲများပြီးသားစတင်ခဲ့သည်။ ray အဖြစ်လမ်း၌ ... ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကြေညာခဲ့သည်။ မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာစီးဆင်းမှုအတွက်Altıparmakလမ်း, အားလုံးအတွက် output ကို, ထိုဆင်းသက်တစ်ခုတည်းလမ်းသွားအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ မြို့ရင်ပြင်, ကြိုငျးဦးတည်ချက်ကိုင်တွယ်ရန်တလမ်းတည်းအတူနှံကောင်ရောင်အကြားအဓိက link ကိုဖြစ်သောဗုဒ္ဓဟူးနေ့လမ်း, ။ မျဉ်းတလျှောက်တွင်လျှောက်ထားခံရဖို့တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများနှင့်ကန့်သတ် .... ယနေ့နောက်ထပ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ... ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြပါရစေ။ ဓါတ်ရထားအကူးအပြောင်းကာလ, အမှတ်ခိုင်ခိုင်လုံလုံအပေါ်လူ့အသက်ကိုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိပေးဆီမီးခွက်တိုးလာနေပါတယ်။ ပင်အသွားအလာအလင်းအိမ်အဖြစ်အသစ်သော applications များမှတ်, ပြန်တမ်းပါလိမ့်မည်။ စုစုပေါင်း ...
ဦးဆောင်မီးအိမ် Reception, TCDD Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဦးဆောင်ပြီး type ကို signal ကိုဦးခေါင်းဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆိုပါမော်နီတာဖော်ပြရန်နှင့် LED ကို DLP ဝယ်လိမ့်မယ်